Gemma losifovna Khalid - Umculi isiRashiya, eyaduma hhayi kuphela ezweni lakubo, kodwa futhi phesheya, Waziwa kakhulu izingoma ukubulawa egcekeni futhi chanson Russian.
Dzhemma halid kwelinye Shintshela ngokuwa zonke kokufa komzimba ewubuciko okwaqala ngayo emhlabeni umculo, hhayi kuphela kazwelonke kodwa futhi amazwe. Lo wesifazane waba umdlali ethinta umphefumulo izingoma wayengeke asonge izandla behluleka ukujabulisa izethameli, nokusebenza kwakhe soulful ka izona zonke izithiyo ekusetshenzisweni kolimi: ngokulinganayo abantu bewathanda bezizwe ezihlukahlukene.
By endleleni, ngale: uma singakwenzi wahlulela abanye imithombo ethembekile, Dzhemma halid, biography, ogama ubuzwe has eside nesithakazelo sabamlalele ngokulinganayo ukubekezela isithwathwa ukuba abamele noma yimuphi ubuzwe. Mhlawumbe kwakungenxa Uyibheka ngokuthi uzibuthe sidonsa kakhulu Motley abathandi bomculo ku ekhonsathini omkhulu avela kuye lo oculayo.
Anyone enyula okuphilwa abasisekelayo: umuntu uhlala kweqiniso kuwe, othile kuphela uNkulunkulu, futhi othile onkulunkulu yawo yonke. Kukho konke ukuphila kwakhe, Dzhemma halid futhi wafuna ukusekelwa yakhe, kwaze kwaba yilapho ekugcineni wahlangana inkolo, ukuphela kakhulu inhliziyo - nobuBuddha. Ukuba yezimo abhekene efana, kufana kakhulu umoya izimfundamakhwela ziyaye lokhu ukholo, Khalid ngokushesha bakwemukele izimiso eziyisisekelo Buddhist. Nanti elinye ubufakazi yokuthi umculi ngesikhathi amakhonsathi yakhe futhi kusihlwa zokudala akusho ulihlanganisa ukubaluleka lesikhumba noma ulimi.
Nokho iminyaka kamuva ngathola umthombo wangempela lapho izimpande umculi uthunyelwe khona igama Dzhemma halid - Biography. umculi ubuzwe ekugcineni ezikhonjwe: Unina wale ntombazane kwaba isiRashiya, kodwa uyise ongowokuzalwa Morocco futhi babevela abangamaJuda.
umculi Ikusasa Dzhemma halid wazalwa ngo-dolobha isiRashiya, eMoscow. Kusukela azalwa, isiphetho intombazane pha igama engavamile, futhi ngengozi kule ingezwe igama igama umzali wafihla ngokwazo izisusa isiko zaseMpumalanga. Kuyaphawuleka ukuthi leli gama phezu izinkinga intombazane elihlobene ne ekuklolodelweni nezinye izingane, kodwa washintsha ngokuphelele ukuphila kwakhe.
Qamba abazali Gemma wakhetha indodakazi yakhe yokudumisa uhlamvu oyintandokazi lesitsetfwe enovelini "I nasibawu". Lokhu kukodwa uthembise intombazane ukuphila egqamile futhi umatasa.
Kodwa injabulo akuzange kuhlale isikhathi eside emndenini Khalid: abazali ngokushesha okukhulu selupholile nomunye, futhi washesha ukuthola isehlukaniso, kokushiya nentombazanyana kudingeka bazibonele. Futhi isiphetho waphonsa Gemma e boarding. Kodwa ngokushesha le ntombazane ngokuzumayo waqala ukubonisa amakhono ezehlukile zomculo.
Ngakho, iminyaka engu-6 nge igama umculi Dzhemma halid, biography, ubuzwe kanye izintandokazi esikhathini esizayo, ukuze sizojabulisa izilaleli zakhe wangena umculo esikoleni inkositini futhi bayan. Yaba isinyathelo yakhe yokuqala endleleni eya udumo samanje. Ngemva kokuqeda esikoleni, kodwa mina ngangikhuluphele eMoscow Regional Umculo School iqanjwe S. S. Prokofeva, uyintombazane nge lolungenamaphutsa iziqu. Futhi ngakho waqala emgwaqeni omude self-ngcono ngokwayo.
Ngo-1987 Dzhemma halid, iculo lakhe manje ujabulela udumo Amazing, babuyela wafike wasiza ukwakha iphethini vocal esiyingqayizivele. Yena wadlulela iphaliswano legatsha State Musical College Gnesin ku vocals. Ngonyaka wokuqala izifundo zabo lapho, yena waqokelwa Polish Song Contest "Vitebsk-88", okwakubekelwa iwine, kuphela ukumela eMoscow Zonke-Union Festival. Inkulumo intombazane kwaba impumelelo futhi wokuqala wabo bonke abadlali. Ekugcineni, yena umklomelo wokuqala futhi umklomelo wokuqala. Waqala kanjalo-ke umsebenzi wakhe wokudala.
Phakathi kuka-1989 no-1994, Gemma waqhubeka uhambo eJalimane nasePoland, lapho yena uhlangene umngane wakhe omkhulu esikhathini esizayo - umqambi Wlodzimierz Korch. Sekuyiminyaka eminingi Indoda ethile yabhalela intombazane esebenza ukuthi Dzhemma halid, ogama iculo ukungena umphefumulo, sengathi opopayi.
Ngo-1990, ngemva uchungechunge sezinxushunxushu nokwanda yezenhlalakahle intombazane Russian kwadingeka suka, ukubhala i-albhamu entsha ngo-amavesi ngomshoshaphansi. Futhi iningi iculo abangu ngokoqobo kulotshiwe shintsho ukukhanya dim the lam abandayo. Khona-ke kwaba khona irekhodi eyodwa ngaphezulu albhamu, "O, lokhu intombazane", okwathi ngemva kwalokho, nganquma ukuvele ngiye uhambo e-United States. Kusukela leli phuzu kuvela inhlangano obuqinile Khalid phesheya: sithathe lolu hambo ukuba siqedwe ngo-ngemva kweminyaka embalwa, kodwa eqinisweni umculi namanje isikhathi eside kakhulu emuva ekhaya.
Ezweni ehluke ngokuphelele zomculo kwafaka umculi lapho ehambela e-United States: kwakungekho inkululeko, futhi zonke izinhlobo nezinhlaka kulabo abathanda futhi bafuna ukwenza. Futhi Gemma Wayemane: uthando lwakhe lomculo, ukuveza imizwa yabo ngokukhululekile, ukuze isibonisi evulekile imizwelo - konke lokhu ithole ukwamukelwa phakathi izilaleli-Americans. Futhi Khalid uma wazithola kuleli zwe, a imibono kuhlanzeke futhi kube kusha emuva kwesikhathi ekhaya.
EMelika, owesifazane wakhetha ukufihla ngenkathi igama lakhe langempela, ngoba Gemma salandelwa Jamal efanayo (Jamuna). Impendulo kungani wanquma ukwenza lokho, akusho okuqondene umculi ngegama Dzhemma halid biography. Ubuzwe kwaba ukuthi imbangela noma ukuthi wazalelwaphi, akunandaba, ngoba igama lalo muntu wesifazane kweqiniso engakaze neyaziwayo phesheya.
E-US, yowesifazane umdlali ezidumile umculo angaphandle (Russian). repertoire yakhe ihlanganisa Russian iculo lempi, iculo elidala nezingoma eziningi chanson. Akumangalisi ukuthi izivakashi njalo amakhonsathi ubuntu zokudala ongenza iculo namabutho edabukisayo ukumamatheka, babe hippie - abantu abalalela kwemizwa, ethwele izwe kuyo yonke indawo.
Uthanda wonke umculo azalelwe Gemma zisencane kakhulu futhi kancane kancane lakhula laba okungaphezu kwalokho. Manje owesifazane injongo yokuphila. Thanda abaculi abaningi, umculo ukulondolozwa Khalid nasezimweni ezinzima, futhi manje yena uyohlale ubuyisele izikweletu.
Phakathi nenkonzo yakhe yokuba, Gemma wakwazi ukudedela albhamu okungenani eziyisithupha ezimele, ngasinye sazo ehambisana ekuphileni-span avela kuye lo oculayo. Lapha futhi lowo wabhala yena, ukudlala ngo esitimeleni, kanye neqiniso lokuthi kwalotshwa Khalid phesheya.
Uhlu olugcwele albhamu neminyaka ukukhululwa kwabo:
1996 - "inguquko Underground";
1998 - "Sengathi intombazane";
2000 - Jamuna - Goodbye Taganka (khiphani "ukudlula ngaphansi" disk);
2009 - "The Girl kusukela Nagasaki";
Okwamanje, bambalwa kakhulu abantu bazi mayelana umculi, kulokho yaphenduka ukuphila kwakhe siqu. Dzhemma halid - esuka kubantu abathembisa emphefumulweni umculo ngiwunike kukho konke ukuphila kwami.
Mhlawumbe siyofika isikhathi lapho bonke iculo eqoshiwe ekudingisweni ukuba baphindele intombazane ekhaya ezweni. Khona-ke Dzhemma halid, ogama discography sesivele sifike kusayizi ehloniphekayo, uzokwenza igalelo lalo isiko Russia.
Ngaphandle kwale ungeke ukwenze: indlela ukukopisha umbhalo kusuka ku-intanethi kwikhompyutha yakho